Top 5 xịt khử mùi nữ tốt nhất có mùi thơm dễ chịu | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Top 5 xịt khử mùi nữ tốt nhất có mùi thơm dễ chịu | Muasalebang in Muasalebang
Iphunga elingaphansi kwamakhwapha lingonakalisa usuku noma umcimbi. Abukho ubumnandi obuphelele lapho uhlezi uphazanyiswa iphunga lomzimba elingemnandi. Isifutho sesiqedaphunga sesifazane singesinye sezinyathelo ezisebenzayo zokukusiza uzizwe uqiniseka.
Nokho, akuwona wonke umuntu owazi ukukhetha umkhiqizo ofanele. Kulesi sihloko, ngizokwabelana nawe okunye okuhlangenwe nakho ekukhetheni ukuthenga lo mkhiqizo.
1 Izifutho ezi-5 ezidume kakhulu zesiqedaphunga zabesifazane namuhla
1.1 I-Dove Power Soft Deodorant Spray
1.1.1 Buyekeza Ngokushesha I-Dove Power Soft Deodorant Spray
1.2 I-Nivea Extra Whitening Female Deodorant Spray
1.2.1 Ukubuyekezwa Okusheshayo kwe-Nivea Extra Whitening Women’s Deodorant Spray
1.3 Enchanteur Charming Deodorant Spray
1.3.1 Ukubuyekezwa Okusheshayo Kwe-Enchantéur Charming Deodorant Spray
1.4 I-Vichy Déodorant Mineral deodorant spray
1.4.1 Isibuyekezo esisheshayo i-Vichy Déodorant Minéral
1.5 Vuselela Isifutho Sephunga Elimhlophe Lephunga Elimhlophe
1.5.1 Ukubuyekezwa Okusheshayo Kwesifutho Sephunga Elimhlophe Lokukhipha Iphunga Elimhlophe
2 Ithebula lokuqhathanisa lezifutho ezidumile ze-deodorant 2022
3 Zizwa ngokukhetha isifutho se-deodorant esingcono kakhulu sabesifazane
3.1 1. Thola izidingo zomkhiqizo
3.2 2. Khetha isifutho sesiqedaphunga esinezinhlayiya ezinhle
3.3 3. Beka phambili izifutho ezingagcina iphunga isikhathi eside
3.4 4. Bheka izithako emkhiqizweni
3.5 5. Hlola usuku lokukhiqiza kanye nosuku lokuphelelwa yisikhathi
3.6 6. Khetha imikhiqizo enamakha afanelekile
3.7 7. Khetha imikhiqizo enemvelaphi ecacile
4 Isiphi isifutho sesiqedaphunga sowesifazane okufanele ngisikhethe?
4.1 I-Dove Power Soft Deodorant Spray
5 Imibuzo ejwayelekile ukubuzwa
Izifutho ezi-5 ezidume kakhulu zesiqedaphunga zabesifazane namuhla
Uphawu lokuhweba: Ijuba
I-Dove Power Soft Deodorant Spray
Buyekeza Ngokushesha I-Dove Power Soft Deodorant Spray
I-Dove Power Soft ilungile Umklamo ohlangene, kulula futhi kulula ukuyiphatha. Imikhiqizo ine 7 amakha ukusiza wena spoilt for choice
Engikuthanda kakhulu ngomkhiqizo utshwala mahhala futhi Iqukethe i-moisturizer engu-1/4 Isiza ukuthambisa isikhumba sangaphansi kwamakhwapha. Isikhumba esonakele siyabuyiselwa, sisiza ngisho nethoni yesikhumba.
Xem Thêm Tìm hiểu về lưỡi cưa sắt hợp kim, có đắt tiền không? | Muasalebang
Iphunga elimnandi kakhulu, acishe afane nephunga lempushana yengane. Amandla iphunga amahora angaphezu kwama-24 ukukhohlisa, kodwa hhayi ukunqoba iphunga.
Isifutho se-Deodorant siyasiza Iqeda iphunga futhi ine-antibacterial.
Nokho, Ikhanda lesifutho liqine kakhuluokubangela ukuzwa ubuhlungu besikhumba.
Uhlobo lwesikhumba olusetshenzisiwe
Zonke izinhlobo zesikhumba
Uphawu lokuhweba: I-Nivea
I-Nivea Extra Whitening Female Deodorant Spray
Ukubuyekezwa Okusheshayo kwe-Nivea Extra Whitening Women’s Deodorant Spray
Lo mntwana usesimweni sebhodlela lesifutho elelulekile, elinolwazi olugcwele kanye neziqondiso emzimbeni. 150ml umthamo.
Iphunga lipholile, lisha, alimnandi, iphunga liphakathi. Nokho, ngibona abanye benu belinganisa iphunga elinamandla. Uma ikhala lakho lizwela iphunga, kufanele ulicabangele
Amandla Ukwehla kwezithukuthuku akukuhle kakhuluKuthatha cishe amahora angu-2-3 ukuqala ukujuluka. Ayifanele nina enijuluke kakhulu.
Nge-licorice extract, i-pearl powder. ibhotela lebanga Ithambisa isikhumba, isiza indawo engaphansi kwamakhwapha iphumele ngaphandle. Ngemva kokuyisebenzisa isikhashana, ngibona ukuthi isikhumba esingaphansi kwezingalo sincishiswa mnyama futhi simhlophe ngokuphumelelayo.
I-Licorice, i-pearl powder. ibhotela
Uphawu lokuhweba: I-Echanteur
Enchanteur Charming Deodorant Spray
Ukubuyekezwa Okusheshayo Kwe-Enchantéur Charming Deodorant Spray
I-Enchnteur Charming iklama amabhodlela ensimbi anezivalo. Emzimbeni, kunephethini ye-rose evezwe emikhiqizweni ye-Enchaneur.
Iphuzu elihle kule ntombazane Isivalo esivikelekilekulula ukuthwala.
I-Enchantéur Charming iyasiza isiqedaphunga esihle Ikugcina womile futhi unganuki usuku lonke
Iphunga linjengoba likhangisiwe, iphunga limnandi futhi liyaheha. Nokho, le ntombazane iphunga alihlali isikhathi eside njengeminye imikhiqizo. Enchanteur Charming kukhona 5 amakha ukuze ukhethe
Intengo eshibhile kakhulu futhi kulula kakhulu ukuyithola.
Xem Thêm 4 cách sửa lỗi thẻ nhớ không format được đơn giản, thành công cao | Muasalebang
Uphawu lokuhweba: Vichy
I-Vichy Déodorant Mineral deodorant spray
Intengo ephezulu uma iqhathaniswa nokusetshenziswa
Isibuyekezo esisheshayo i-Vichy Déodorant Minéral
I-Vichy Déodorant Minéral yakhelwe njengebhodlela elincane le-Vichy mineral spray, umthamo 125 ml.
Uma ufutha lo mkhiqizo, kufanele uwugcine kude no-15cm ukusuka endaweni yamakhwapha ukuze ugweme ukuthola uthuli olumhlophe. I-Deodorant Mineral inephunga elilulahhayi nokhahlo, kulula ukuyisebenzisa kufanelekile kokubili amadoda nabesifazane.
Umkhiqizo Ayiqukethe usawoti we-aluminium, amaminerali acebile ukusiza ukuqeda iphunga futhi wondle isikhumba bushelelezi, ukuthambisa ngempumelelo.
Ngokusho kwe-ejensi yokukhangisa, ikhono lokugcina iphunga lomile amahora angama-48, kodwa ngathola ukuthi ekupheleni kosuku, lonke iphunga lalingasekho. Ngosuku olumatasa kakhulu, emini, iphunga selicishe lanyamalala.
Umkhiqizo wenza umsebenzi omuhle wokuqeda iphunga nokusiza ukomisa, awukwazi ukuthatha indawo yamakha. Uma udinga isifutho sesiqedaphunga esinuka kamnandi.
IVichy Déodorant Mineral iyabiza kakhulu, 284,000 VND ukuze ngifafaze isiqedaphunga esingu-125ml.
Izithako ezi-4 zamaminerali eziyingqayizivele Ca, Na, Mg, CO3, vitamin B5
Uphawu lokuhweba: Refresh
Vuselela Isifutho Sephunga Elimhlophe Lephunga Elimhlophe
Ukubuyekezwa Okusheshayo Kwesifutho Sephunga Elimhlophe Lokukhipha Iphunga Elimhlophe
I-Refre Whitening inomklamo webhodlela lepulasitiki eliyicylindrical 30ml umthamo. Ingxenye yomlomo womkhiqizo ayivikelekile kakhulu. Idizayini ehlangene elungele ukuthwala.
Kuyisifutho se-perfume se-deodorant Iphunga elimnandi, hhayi elinamandla. Uma ifuthwa esikhumbeni, yoma ngokushesha futhi ayinamafutha. Lo mngani Kukhona amakha angu-6 ngezitayela ezi-6 ezahlukahlukene njengokuthambile, okumnandi, okunethezeka.
Kukhona inhlaba ekubunjweni kwayo Isiza ukupholisa isikhumba, ivimbele amagciwane adala iphunga kanye nezithako ze-licorice, usizo lwe-vitamin C isikhumba esimhlophe nesibushelelezi. Umkhiqizo uvimbela iphunga futhi ulawula izindlala zomjuluko, usize ukugcina umzimba womile.
Nokho, Umkhiqizo we-spray muhle kakhuluumthamo mncane, ngakho uphela ngokushesha. Ukugcina iphunga elibi, cishe amahora ama-4. Akuyona inketho kulabo kini abadinga umkhiqizo ohlala usuku lonke noma onuka kakhulu.
Refresh Whitening can kubangela ukuphuzi nokuqina kwezindwangu. Kwifomula yotshwala Ngakho uma unesikhumba esibucayi, cabangela ngokucophelela lapho uthenga.
I-Aloe vera, i-licorice, i-vitamin C
Isikhumba esivamile, isikhumba esomile, isikhumba esihlangene
Ithebula lokuqhathanisa lezifutho ezidumile ze-deodorant 2022
Zizwa ngokukhetha isifutho se-deodorant esingcono kakhulu sabesifazane
1. Thola izidingo zomkhiqizo
Uma usebenzisa isifutho se-deodorant ukuze udale iphunga, kufanele ukhethe izifutho eziyiphunga ngokuya ngokuthanda kwakho ukuze udale umuzwa wokuzethemba.
Ngokuphambene nalokho, uma uyisebenzisela ukuvimbela ukukhishwa komjuluko, kufanele ubeke phambili ukukhetha imikhiqizo enezithako ezivimbela izindlala zokujuluka ezifana nosawoti we-aluminium, utshwala bamakhemikhali … esikhundleni samaphunga.
2. Khetha isifutho sesiqedaphunga esinezinhlayiya ezinhle
Izifutho eziningi zanamuhla zesiqedaphunga ziklanywe ngendlela yomlomo wesifutho. Imibhobho kufanele ibe mikhulu futhi ifafaze izinhlayiya ezinhle. Izinhlayiya ezinhle zizosakaza iphunga ngokulinganayo, zome ngokushesha futhi zibe nekhono lokugcina iphunga isikhathi eside.
3. Beka phambili izifutho ezingagcina iphunga isikhathi eside
Kulabo kini abavame ukuzivocavoca, kufanele ukhethe amabhodlela e-spray akwazi ukugcina iphunga. Ngokuvamile phakathi kwamahora angu-24 kufanelekile.
4. Bheka izithako emkhiqizweni
Njengoba isifutho sithintana ngqo nesikhumba, udinga ukubhekisela ezingxenyeni eziqukethwe kumkhiqizo. Kufanele ukhethe izifutho ezinezithako zemvelo kanye nokusetshenziswa okuncane kotshwala bamakhemikhali. Ngesikhathi esifanayo, umkhiqizo akufanele usetshenziswe uma kunezithako ezingezwani nezizwelayo emzimbeni.
5. Hlola usuku lokukhiqiza kanye nosuku lokuphelelwa yisikhathi
Lapho uthenga isifutho se-deodorant, hlola ngokucophelela usuku lokukhiqiza kanye nosuku lokuphelelwa yisikhathi okuphrintiwe ngalo emkhiqizweni. Ukusuka lapho, linganisela bese ukhetha umkhiqizo owanelisa kakhulu. Kufanele ubeke phambili imigqa yomkhiqizo eneshelufu ende yokuphila, kude nosuku lokusetshenziswa.
6. Khetha imikhiqizo enamakha afanelekile
Njengamanje emakethe kunezinhlobo eziningi zezifutho zesiqedaphunga zesifazane ezinamaphunga ahlukene. Ngokuya ngokuncamelayo, ungakhetha umkhiqizo ofanele.
Kodwa-ke, ngokubona kwami, kufanele ukhethe izifutho ze-deodorant ezinephunga elimnandi, hhayi ezinzima kakhulu ukuletha umuzwa okhululekile futhi omnandi kakhulu.
7. Khetha imikhiqizo enemvelaphi ecacile
Ukukhethwa kwemikhiqizo ekhiqiziwe ngokuqondile nangokucacile kukusiza ukuthi uthole imikhiqizo yekhwalithi engcono kakhulu. Ngaphezu kwalokho, le mikhiqizo izoqinisekisa ukuphepha kwabasebenzisi.
Nakuba lezi zifutho zokuqeda iphunga zizobiza kakhulu, iphunga nekhwalithi kusebenza kakhulu. Ngaphandle kwalokho, kufanele unikeze okuncamelayo izitolo ezifuthwayo ezinephunga elimnandi ezisekelwa amakhasimende amaningi ukuze uqinisekise ukuphepha komkhiqizo.
Isiphi isifutho sesiqedaphunga sowesifazane okufanele ngisikhethe?
Ngenhla kunezifutho ezi-5 eziphezulu ezidume kakhulu zesiqedaphunga sabesifazane namuhla. Umkhiqizo ngamunye unezinzuzo zawo siqu kanye nebubi. Kodwa-ke, ngokubona kwami, i-Dove Power Soft Deodorant Spray 150ml iyona engcono kakhulu ngenxa yalezi zizathu ezilandelayo:
Mayelana nomklamo: I-Dove Power Soft Deodorant Spray 150ml inomklamo okhangayo nowesimame. Umkhiqizo unobukhulu obuthile obungu-4.5 x 4.5 x 17.6 cm, oqine kakhulu esandleni futhi kulula ukuwuthwala lapho uhamba.
Mayelana nephunga: Umkhiqizo uhlaba umxhwele ngephunga elithambile njengempushana ye-talcum ukuze udale umuzwa wokunethezeka kumsebenzisi.
Mayelana nokugcina iphunga: Isifutho se-Deodorant sihlaba umxhwele ikhono laso lokugcina iphunga isikhathi eside. Ngesikhathi esifanayo, umkhiqizo unamandla okunciphisa ukuthukuthela komzimba.
Qaphela: Isifutho ngasinye sesiqedaphunga sinephunga elihlukile kanye nomphumela. Kufanele usekelwe kumibandela yezidingo, izintandokazi kanye nesabelomali ukukhetha umkhiqizo olungile
Ungawushiyi umkhiqizo ezindaweni eziseduze nomlilo ongabangela ukuqhuma
Ungasebenzisi imikhiqizo enezithako ezibangela ukucasuka kwesikhumba
Gcina isifutho se-deodorant ezindaweni ezipholile nezomile
Ungafafazi emehlweni futhi uvule izilonda
Umkhiqizo awukwazi ukwelapha ichthyosis
Ungasebenzisi kabi umkhiqizo kakhulu ngoba udala izifo zama-pores kalula
Kuye ngendawo yomuntu ngamunye, umkhiqizo ungase ubangele ukucasuka kwesikhumba. Lesi simo kungenzeka kungenxa yokuthi umsebenzisi akazwani nezithako zesifutho sesiqedaphunga noma ngenxa yokuthi usebenzise umkhiqizo ophelelwe yisikhathi. Kuleli qophelo, yeka ukuyisebenzisa futhi uye emitholampilo ehloniphekile ukuze uthole iseluleko.
Isikhathi esihle sokusebenzisa isifutho se-deodorant kusebusuku. Yilapho ama-pores enwetshiwe, isifutho se-deodorant sizovimbela izindlala zokujuluka futhi ilethe ukoma esikhumbeni ngaphansi kwezingalo.
Ukuze ukwazi ukulondoloza iphunga lomkhiqizo. Kufanele uhlanze kahle indawo ezofuthwa. Ngemuva kwalokho, vumela ikhambi lome ngokuphelele ngaphambi kokugqoka ihembe. Ngesikhathi esifanayo, bamba ibhodlela lesifutho kude kancane ukuze usakaze iphunga kangcono
Isifutho sesiqedaphunga sabesifazane singasetshenziswa nakulabo abanesikhumba esibucayi. Kodwa-ke, lapho ukhetha ukuthenga umkhiqizo, kufanele ubheke izithako eziqukethwe ebhodleleni. Lokhu kuzoqinisekisa ukuphepha kwesikhumba sakho.
Ngokuya ngezidingo zakho nokuncamelayo, ungafaka esikhundleni sakho uma kudingeka. Ukushintsha iphunga ngezikhathi ezithile nakho kuyinto ejabulisayo ukuyenza. Ngaphandle kwalokho, uma uzizwa uluma, uvutha uma usebenzisa, kufanele umise ngokushesha umkhiqizo futhi uthole umkhiqizo ongcono wekhwalithi.
Bona okwengeziwe: Amarola angama-5 adume kakhulu esiqedaphunga abesifazane namuhla
Kungashiwo ukuthi isifutho sesiqedaphunga sesifazane sisize abesifazane ukuthi bazethembe futhi bakhululeke bagqoke izingubo ezisondelene namakhwapha. Ngezifutho zesiqedaphunga zesifazane ezingenhla kanye nolwazi lokukhetha izifutho zesiqedaphunga, ngethemba ukuthi ungazikhethela umkhiqizo ongcono kakhulu.